Wargeys kasoo baxa talyaaniga oo kashifay caruurta ay rajeynayaan CR7 & Jaceylkiisa Georgina xilli hooyadiis ay horay u beenisay. - Hablaha Media Network
Wargeys kasoo baxa talyaaniga oo kashifay caruurta ay rajeynayaan CR7 & Jaceylkiisa Georgina xilli hooyadiis ay horay u beenisay.
HMN:- Xantii aheyd in jaceylka Cristiano Ronaldo gabadha la yiraahdo Georgina Rodriguez ay uur leedahay ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii wargeys laga leeyahay dalka talyaaniga uu ka dhawaajiyay in labada lamaane ay rajeynayaan mataane.
Weeraryahanka Real Madrid ayaa dhawaan malaayiinta ku xiran bartiisa Instagram la wadaagay sawir ay gacantiisa saaran tahay caloosha jaceylkiisa taasoo taageerayaasha iyo saxaafaduba ay u fasirteen inuu tilmaamayo uurka ay leedahay gabadhaan 22-jirka ah.
Hooyada xidigaan ayaa beenisay wararkaas inkastoo Georgina ay jawaab kulul ka bixisay markii ay sawir lasoo gashay mid ka mid ah dhaqaatiirta ku taqasustay qaliinka balaastikada ah ee ka xamasha Madrid.
Wargeyska CHI la yiraahdo ee dalka talyaaniga ayaa soo daabacay maanta in labadaan lamaane ay rajeynayaan caruur mataano ah.
Si kastaba xanta waxey noqotay mid baahda – waxaana laga war sugi doonaa inta ay afka kala furi doonaan Ronaldo iyo Rodriguez oo aan wali ka hadlin waxa ka jira arintaan marka laga tago iney sawiro ku muujiyaan wax walba.